Bushing - China Kanaif TAPAKA FANTSONA
Loha habe ny Bushing:
Famaritana ny Bushing:
Ny fitaovana avy any DISA Danemark, DJ AMF Japana, SINTOKOGIO Japana be mpampiasa ao amin'ny mora volavolaina vy productline faladiany, miantoka ny fahamarinan-toerana ny vokatra tsara.
Mampiasa spectrometer avy any Oxford Instruments mba hanamarinana ny fanazavana ny toetra.
Mampiasa hafanana avo entona voajanahary sarobidy annealing lafaoro lehibe, hentitra mifehy ny dingana annealing, hanatsarana ny fananana ara-batana ny fitaovana.
Tsirairay mety bushing sodina rehefa rivotra tightness fitsapana, tsy azo antoka leakage.
Hentitra mifehy fakan-tahaka toa ny kofehy, fitoviana, Angle, nify karazana, samy miaina mahery plug habetsahan'ny ho an'ny fizahan-toetra.
Ny sodina Fittings manan-baovao miainga avy 1/8 "amin'ny alalan'ny 6.
Tsara ela miasa mikasika ny Fahasarotana amin'ny fiainana.
Malama tsy misy etỳ ambonin'ny fasika lavaka.
mandritry ny taona. hatevin'ny fanitso coating dia ambony kokoa noho 86 à voalaza ao ASME, EN (70um), Din (70um), si (78um).
Previous: Faladiany R / L
Alatsaho Iron mora volavolaina-Bushing
Voaro Plain Type Bushing
Mora volavolaina Iron Threaded Bushing
Fampihenana Street kiho, 90 °
Mirazotra Thread Socket
Voaro Headpiece Union
Seza fisaka Union